Xai Yak Techonology: March 2012
ချစ်သူမိန်းကလေး လိုက်နာရမည့် ရည်စားကျင့်ဝတ် ( ၆ ) ချက်....
BEER သောက်လျှင် ..အပြစ်မမြင်......ချစ်ချစ်ခင်ခင်..နေရမည်.
ချိန်းလို့တွေ့က..ချစ်ချစ်အား.... တနေ့သုံးခါ နမ်းရမည်
ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား ထိုနှစ်ပါး သည်းညည်းများလည်း ခံရမည်..။
... ချစ်သူ ပြောတိုင်းမှာ ခေါင်းညိတ်ကာ.ဟုတ်ကဲ့ များ လည်း ပါရမည်..။
ထိုအရာများ.......မလိုက်နာငြား ကညာ့ လိုပင် ကျန်ရစ်မည်..:PPP..........။
ချစ်သူယောကျာ်းလေး လိုက်နာရမည့် ရည်စားကျင့်ဝတ် ( ၆ ) ချက်
ညာခိုင်းခဲ့လျှင် အပြစ်မမြင် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူလုပ်ရမည်
ဘဲလေးချောချော ငေးနေလျှင် မုဒိတာလည်းပွားရမည်
ချိန်းလို့တွေ့က ကိုကိုက ကုန်ကျသမျှ ရှင်းရမည်
ချိန်းသူ မေအား အလေးထား တစ်နာရီခန့်စောင့်ရမည်
ပေါ်တင်လိမ်လျှင် ''''အ ''''သလိုပင် မသိချင်ယောင်ဆောင်ရမည်...။
စိတ်ကောက်တိုင်းရာ ချော့ဖို့ ရာ တော်ကီများလည်းညက်ရမည်။
ထိုအရာများ မလိုက်နာငြား..လူပျိုကြီးဘ၀ နှင့်ပင် ကျန်၇စ်၇မည်
Posted by Xai Yak at 17:53 No comments:
ကိုယ့်ကွန်ပျုတာကို hotspot အဖြစ်အသုံးပြုနည်း ကတော့ ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးဝင်မလဲ ဆိုတော့
ခက်ရှာရှာဘဲ ပြောစရာတောင် သိပ်မရှိသလိုဘဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သိပ်ပြီး အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး
ဒါပေမဲ့ တခါတလေမှာ လိုအပ်လာတဲ့ အခါမှာ ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ထားရန်ပြန် သတိရမိပြီးအသုံးဝင်မှာပါ။
ကျွန်တော်အတွက်တော့ တော်တော်ကိုအသုံးဝင်ပြီး ဦးနှောက်ခြောက် ခဲရာခဲစစ်ရှာဖွေထားတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းကနေပြီးတော့ laptop တယောက်တလုံးစီပေးပါတယ်
ဒီထဲမှာ wifi ရအောင်ပါလုပ်
ထားပြီး password က သိတဲ့အတိုင်း ဒီ Australia က သူတို့ရဲ့ system security ပိုင်းကိုသေသေချာချာ
ချထားတယ် WAP2 နဲ့လုပ်ထားတယ် ဆိုတော့ wifi ကို ကျောင်းက laptop နဲ့ သုံးလို့ရပေမဲ့ ကျွန်တော့
Ipad မှာသုံးလို့မရဘူး။ Ipad မှာ wifi ရှာရင်တော့ တွေ့တယ် ဒါပေမဲ့ join လို့မရဘူး။ ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ
အထက်က ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပျုတာကို hotspot အဖြစ်အသုံးပြုပြီး ကျွန်တော် ipad ထဲကို
wifi ပြန်လွဲပေးလိုက်တာပေါ့ ဒီတော့ အေးအေးဆေးဆေး ကျွန်တော် Ipad ကနေ ကျောင်းရဲ့ wifi ကိုအေး
အေးဆေးဆေး သုံးပြုလို့ရပါပြီးပေါ့ အကယ်၍သာ ဒီအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ Ipad ထဲကနေ WAP2 ကိုသိပြီး
အသုံးပြုရင်တောင် ကျောင်းက Technician တွေက trace လုပ်နိုင်သေးတယ် အခုတော့ အေးအေးဆေးဆေး ကျောင်းက laptop နဲ့ ပြန်လှည့်လိုက်တာပေါ့။ ဒါတွေမကသေးဘူး ကျောင်း
wifi ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း site တွေတော်တော်များများကို block ထားတယ် www.sbsangpi.com
အပါဝင်ပေါ့ ဆိုတော့ ကျောင်းက laptop ကနေ proxy site တွေ proxy တွေ ပြောင်းပြီး block ထားတဲ့ site တွေကို ကျော်ချင်တော့လဲ မရပြန်ဆိုတော့ Ipad ကနေပြီးတော့ Proxy number ကိုပြောင်းပြီး ကလိရပြန်တာပေါ့။ ဆိုတော့ အခုဆို Laptop ကို hotspot အသုံးပြီး Ipad ကနေ Proxy ပြောင်းပြီး အေးအေးဆေးဆေး internet ကို 24 နာရီ ၁ မိနစ်မခြား ကိုင်လို့ရပြီးပေါ့
အားလုံးအချုပ်ကတော့ Hotspot လုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးလေးတွေပါ ကျွန်တော်ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးနဲ့
ဆိုတော့ http://virtualrouter.codeplex.com/releases/36035/download/93540 ကနေ software
လေးကို ဒေါင်းပြီးတော့ run လိုက်ပါတော့။
Posted by Xai Yak at 18:59 No comments:
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတလီမြောင်ဘတ်မြန်မာကို ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်မည်
ကိုရီးယားသမ္မတ မစ္စတာလီမြောင်ဘတ် (LeeMyungBak)သည် ၎င်း၏ ပထမဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ရန်ရှိနေကြောင်း သိရကာ မြန်မာပါဝင်သော အာဆီယံ + ၃ အနာဂတ် လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း ၇-၃-၂၀၁၂ ရက်က သိရသည်။ အသက် ၇၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော မစ္စတာလီမြောင်ဘတ်အနေဖြင့် ၎င်း၏သမ္မတသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်မည့် ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ကာ နှစ်နိုင်ငံ အာဏာရပါတီများ၏ အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ် ဆွေးနွေးကြမည်ဟု သိရသည်။ ''ဒါက ကောင်းတဲ့
လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်သလို ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရဲ့ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ စိတ်ဝင်စားမှုပိုတဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်'' ဟု သမ္မတ၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင်ကပြောကြားသည်။
မစ္စတာလီသည် New Frontier Partyမှ ၀င်ရောက်ရွေးကောက်ခံခဲ့ပြီး သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သူ ဖြစ်ကာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သား သမီးလေးဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။ ''အာဆီယံရဲ့ ပြင်ပနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားရဲ့ ခေါင်းဆောင်လာမဲ့ ကိစ္စကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စနစ်တစ်ခု ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာကို လာကြည့်တဲ့ သဘောမှာရှိတယ်''ဟု UMFCCIမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမောင်ရွှေ ပြောကြားသည်။''ဒီလိုမျိုးပဲ ထင်သာမြင်သာတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ဒါ့ထက်ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတကာက လုပ်ငန်းစုံနဲ့၊ လူကြီးပိုင်းတွေ ဆက်တိုက်ဝင်လာနိုင်တယ်'' ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ မစ္စတာလီသည် အာရှ၏ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်နေပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က ကမ္ဘာ့အဆင့် G-20 Seoul Summitကို အောင်မြင်စွာ ဦးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by Xai Yak at 18:34 No comments:
Posted by Xai Yak at 21:40 No comments:
Posted by Xai Yak at 21:34 No comments:
ရေသောက်ဆင်းလာတဲ့ ဆင်နှစ်ကောင်ကို ငှက်များ အုပ်စုလိုက် အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်နေတာကို ယခုလိုမြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Satao Camp water hole အမည်ရ ရေကန်မှာ ကျက်စားနေတဲ့ ငှက်တွေဟာ သူတို့ သောက်သုံးနေ တဲ့ရေကို ဆင်တို့လာရောက်သောက်သုံးခြင်းအား မနှစ် သက်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။
နေရာဒေသကတော့ ကင်ညာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဖြစ်ပြီး ရေသံယံဇာတ ရှားပါးတဲ့ဒေသတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရေသောက်ဆင်းလာတဲ့ ဆင်နှစ်ကောင်ကို ငှက်များ အုပ်စုလိုက် အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်နေတာကို ယခုလိုမြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Satao Camp water hole အမည်ရ ရေကန်မှာ ကျက်စားနေတဲ့ ငှက်တွေဟာ သူတို့ သောက်သုံးနေ တဲ့ရေကို ဆင်တို့လာရောက်သောက်သုံးခြင်းအား မနှစ် သက်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာဒေသကတော့ ကင်ညာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဖြစ်ပြီး ရေသံယံဇာတ ရှားပါးတဲ့ဒေသတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 21:28 No comments:
ကျွန်တော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ အိမ်နီးချင်း ဆွေမျိူးပေါက်ဖော်ကြီးများကတော့ တစ်မျိူးနဲ့ တစ်မျိူး
အခုတစ်ခါလည်း ဂေါ်ဖီအတုပါတဲ့ ...
ဘယ်သူသေသေ ကိုယ်ချမ်းသာယင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ထားရှိတတ်ကြတာ အံ့ သြလို့ မဆုံးပါ
ဒီလိုစိတ်မျိူးဆိုတာကလည်း တရုတ်မှ၊ ဗမာမှ၊ ကုလားမှ မဟုတ်ပါဘူးလေ...
တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်နေသဘောထား၊ ခံယူချက်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်တော့ အင်တာနက်ပေါ်ရောက်လာတာ တရုတ်ပြည်ကမို့ တရုတ်
လုပ် အစားအစာအပြင်၊ အသီးအနှံပါ စိတ်မချရဘူးဆိုတာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်...
Posted by Xai Yak at 15:36 No comments:
Pls Go Away HIV virus from our living.
ကျနော်အခု အရမ်းဝမ်းနည်းနေတယ် အရမ်းချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အတွက်ပါ (အတွဲပါ)
ကျနော်ယောက်ျားတန်မဲ့ မျက်၇ည်ကျနေပါတယ် အရမ်းဝမ်းနည်းနေတယ်ဗျာ
ကျနော်7ရက်နေ့က နယ်ကနေရန်ကုန်ကိုလာပါတယ် အဲအချိန်မှာ ငယ်ငယ်တည်းကအရမ်းခင်တဲ့သူငယ်ချင်းကဖုန်းဆက်တယ်
သူလည်းကျနော့်လိုပဲ B.E.S.T နဲ့ သင်္ဘောလိုက်ဖို့လုပ်နေတာပါ ကျနော်ပဲ လုပ်ခိုင်းခဲ့တာပါ သူက Desk ကျနော်က Engine ပဲကွာတာပါ။
ဖုန်းဆက်တော့ သူ က4Ticket တက်ဖို့ ဆေးစစ်ရပါတယ် ဆေးစစ်ချက်အဖြေကိုပြောပါတယ် မကောင်းဘူးတဲ့......
ကျနော်ထင်တာက B ပိုးရှိတယ်ထင်လို့ပါ ဒါပေမဲ့နောက်ပြီး မင်းကမကောင်းရအောင် အေကိုက်နေလို့လား လို့ မေးတာ သူက ငိုကောဗျာ ဟုတ်တယ်တဲ့ ကျနော်ကနောက်တယ်မှတ်တာပေါ့ ဒါနဲ့ သွားတော့ သူက ဆေးရုံမှ ထပ်စစ်ထားတယ်9ရက်နေ့ ရမယ်တဲ့ (ဒီနေ့ပေါ့ဗျာ) ကျနော်လည်းခုလိုက်သွားတာ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ တကယ်ဖြစ်နေတယ် သူက ဆိုးခဲ့တာကိုး လွန်ခဲ့တဲ့ 2နှစ် 3နှစ်လောက်က ကျနော်တို့ 16နှစ် သားလောက်ပေ့ါ 3နှစ်လောက်ကပေါ့ဗျာ ... ကျနော်တို့တားခဲ့ဖူးပါတယ် သူကပြောတယ် မပိုင်ရင်ခြင်တောင်မရိုက်ဘူးတဲ့ ဟုတ်ပါတယ် ခြင်ကတော့ သူ့ကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူး ခုတော့ HIV ကသူ့ကိုရိုက်နေပြီ သူ့ရိုက်တာ ပြသနာမဟုတ်ဘူး ပြီးခဲ့တဲ့ 2011 စက်တင်ဘာလမှာ သူအတည်ထားတဲ့ကောင်မလေး (သူက အတည်လို့တော့ပြောတာပဲ) ကျနော်သူငယ်ချင်းလည်းဟုတ် ညီမ ဆိုလည်းဟုတ်တဲ့ သူဆီက အဖြေရပါတယ် ကျနော့် ကြောင့်ပေါ့ဗျာ ကျနော့်ကိုသူက အတည်ပြောလွန်းလို့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ လှော် လိုက်မိတာ အဲ ဒီကောင်က ချစ်သူကို ချစ်သူအဆင့်မှာတင်မရပ်ခဲ့ဘူးဗျ ကောင်မလေးကို ကျနော်တို့ကတားထားတယ် ဒီကောင်ကိုမယုံနဲ့အုံး စောင့်ကြည့်အုံးဆိုပြီးပေါ့ (ကျနော်တို့ကိုကမကောင်းတာပါဗျာ ) ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော်ကလည်း နယ်ပြန်ပြီးနေတာများတယ် DMA ရုံးကိစ္စရှိမှ တက်လာတယ် အော အားလုံးသိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပန်းခြွေသလိုခြွေကြတဲ့နေ့ ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ 14 (အရမ်းအကျဉ်းတန်တယ်လို့ကျနော်ထင်မိပါပြီ) မှာ သူက ယုံမှတ်ပြီးပုံအပ်ခဲ့တယ်ဗျာ ... ခုတော့ သူကို့ပေးမသိပါဘူး ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပဲသိသေးတာပါ ကောင်လေးအိမ်ကလည်းမသိဘူး ခုတော့ ဒီကောာင် သင်္ဘောလိုက်လို့မရတော့ဘူး ဗျာ
အဲထက်ဆိုးတာက ဒီကောင် ဆိုးနေရင်အနေအထိုင်မဆင်ခြင်သေးရင် ကျနော်သူငယ်ချင်း 2နှစ်တောင်ခံပါ့မလားဗျာ ခုတော့ကျနော်သူ့အိမ်ကို သူမပြောလည်းအသိပေးထားတော့မယ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ သူ့ သက်တမ်းစေ့မနေနိုင်တောင် အသက်ရှည်အောင်ပေါ့ဗျာ ၀မ်းနည်းတယ်ဗျာ သူကထားတော့ သူဆိုးလို့ မိုက်လို့ ခွေးဆန်ခဲ့လို့ (ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွတ်ပါဗျာ) ဖြစ်တာ ကျနော့်ညီမလေး (အရမ်းခင်တာပါ ငယ်ငယ်လေးတည်းက သိတာပါ သူ့အိမ်ဆိုကျနော်ဝင်ထွက်နေတာပါ မိသားစုတွေလိုပါ)ကိုပါဆွဲခေါ်သွားတယ်ဗျာ သူကအခုဆေးကျောင်းတက်နေတာပါ ကျောင်းကိုတော့ ညီမလေးသိက္ခာကိုငဲ့ပြီး မပြောတော့ပါဘူး... သူကလည်းဆေးကျောင်းတက်ပြီး ကျန်းမာရေးဗဟုတုတ မရှိဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ် အဲ သူလည်းဘယ်ထင်ပါ့မလဲ သူချစ်တဲ့သူအတွက်ကိုး
ကျနော်ပြောချင်တာ ရိုင်းနေပေမဲ့ လည်းသတိပေးချင်တာရယ်နောက်အဲလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရအောင်ရယ် နှမ အမချင်းကိုယ်ချင်းစာတာရယ် ဘော်ဒါတွေ အကိုတွေကိုလည်း အေမကိုက်စေချင်တာရယ်ပြောပါရစေ ... အဲလိုကိစ္စတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြပါဗျာ သမ္မီးရည်းစားတွေလည်း ဖြူစင်စွာ ချစ်ကြပါဗျား ... တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
အဲ ... မရှောင်နိုင်လည်း အပျို ရည်ကိုရလို့ ဘာလို့ မတွေးပါနဲ့ဗျာ ကျနော်ဆိုလိုတာက အကာအကွယ်သုံးကြပါ
ကောင်မလေးက အဖြူထည်ပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ က ဘာမှန်းမသိလို့ပါ အဲ ခင်ဗျားတို့က ဖြူပေမဲ့လည်း ကောင်မလေးက (...)
နောက်တစ်ခု အခု ညစ်ညမ်းဆိုက်တွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ် မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေး မျိုးပွားအင်္ဂါကို (...)နဲ့ (..) ပေးတာတွေပေါ့ ရိုင်းရိုင်းပြောရ ပလွေကိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ အဲလိုမျိုး လုပ်ရင်တောလည်း အကာအကွယ်သုံးလည်းမထူးပါဘူး HIV ပိုးက မျိုးပွားအင်္ဂါက ကူးတာများတယ်လို့ လေ့လာဖူးပါတယ် အဲလိုမျိုးလုပ်တော့ သဘောပေါက်တော့ဗျာ...
အိမ်ထောင်မကျခင်ဖြူစင်ပေးကြပါ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေ လည်းခု ယဉ်ကျေးမှုတွေပျောက်သလောက်ဖြစ်နေပြီ (အားလုံးကိုချုံပြောတာဟုတ်ဝူးနော်)အဲလိုဘ၀တွေပေးဆပ်ပြီး အိမ်ထောင်ဖက်လွဲတော့ အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ် စိတ်သန့်ရဲ့လား ကျနော် ပြောမယ် ကြေငြာဝင်တာမဟုတ်ဘူး (ဂန်ထူးတော့ပြောဖို့မကြံနဲ့ လက်တွေ့ပြလို့ရတယ်) ကျနော်လည်းကောင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး အရင်ကပေါ့ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က ရည်းစားရှုပ်တာ အကန့်ရှိတယ် ကိုယ်မကြိုက်တာလည်းပါတယ်ဗျ လက်ကိုင် ခါးဖက် ပုခုံးလေးဖက်ပဲရှိတာဗျ နမ်းတောင်မနမ်းခဲ့ဘူး ကိုယ်မကြိုက်တာ
ခုကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေ့နေတယ်ပြောရခက်နေတယ် တချိန်က အမှောင်တွေစိုးနေတာကိုး ဒါတောင်ကျနော် ကျိန်ပြောရဲတယ်
အခု အသက် 19 ကျော်ပြီ 9လပိုင်းဆို 20 ပြည့်ပြီ လူပျိုပဲ ကာမ လုံးဝကင်းတယ်ဗျာ ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ လက်ကိုင် ခါးဖက် ပုခုံးဖက်က မပိုခဲ့ဖူးဘူး ဒါကကြွားတာမဟုတ်သလို အသံကောင်းဟစ်တာမဟုတ်ဘူး နှမခြင်းစာနှာတဲ့ စိတ်ထားကိုပြောတာပါ ဒါတောင်အခု ချစ်သူကို ဖွင့်ပြောဖို့ ၀န်လေးနေတယ် ချစ်သူကလည်းနည်းနည်း ရှုပ်တော့ပိုဆိုး
ခုတောင် ရည်းစားနဲ့ပြတ်နေတယ်လို့သိတယ် ၀င်ဖို့လက်တွန့်နေလို့ ထားပါဒါက ခုပြောချင်တာက AIDS ရောဂါအတွက်
တားဆီးနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ တွေ တတ်နိုင်တာက လိင်ကိစ္စဆင်ခြင်ကြပါလို့တောင်းဆိုချင်တာရယ် ရည်းစားနဲ့ အဖြူသက်သက်နေကြပါတယ် မရှောင်နိုင်လည်း် အကာအကွယ်သုံးကြပါလို့ပြောခြင်ပါတယ်
Pls use Condon for your Health
အကာအကွယ်က လည်းဈေးမကြီးပါဘူး အလွယ်လည်းဝယ်ရပါတယ် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာပါ/ ဒီတော့ ကျနော်အားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာက
AIDS ကို ကရုပြုပါ ကိုဖြစ်ကိုယ်ခံ ဆိုပေမဲ့ ကိုတစ်ယောက်ပဲ ခံရတာမဟုတ်ပါဘူး ကို့ ချစ်သူတွေကို ခံစားရစေတယ်
ဒါ့ကြောင့် သမ္မီးရည်းစားတွေ အဖြူစင်ဆုံးမဟုတ်ရင်တော့ အကာအကွယ်သုံးကြပါရန်နှင့် ကျနော်သူငယ်ချင်းနဲ့ ကျနော့်ညီမလေးလိုချစ်တဲ့ ကောင်မလေးအတွက်ဆုတောင်းပေးကြပါလို့ ကျနော်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ် ....
Posted by Xai Yak at 13:242comments:
တကယ့်လို့ ကိုယ်က မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် ကိုတပ်ထားတယ်။ ဘေး ပတ်ဝန်းကျင်ကသာ ကိုယ့်ရဲ့ wireless network ကို ယူသုံးပြီး အဲဒီ မြန်နှုန်းမြင့် လိုင်းကို ပါ သုံးနေ ရင် ကိုယ့်အတွက် နစ်နာမှု တွေ ရှိသလို ကိုယ့် ကွန်ယက် အတွက်ပဲ share လုပ်ထားတဲ့ အရေးကြီး data တွေပါ သူတို့ ယူကြည့်လို့ ရ လို့ကတော့ ပြသနာ ရှိတဲ့ အပြင် မတော်လို့ သူတို့က တရားမဝင် အလုပ် တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ယက်ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်တယ် ဆိုရင် အကြီး အကျယ် ပြသနာ တက်မဲ့ ကိစ္စ ပါ။ ဒါကြောင့်အခု .
ကိုယ့်ရဲ့ wireless network ကို ယူသုံး နေတာ ရှိမရှိ ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ အချက် အလက် တွေကို သိသလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 09:07 No comments:
နေပြည်တော်ရှိ ထူးဆန်းသည့် ကျောက်တုံးကြီးကို လာကြည့်သူ များပြားနေ
နေပြည်တော်တွင် ယခုအခါ လူအများ စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည့် ထူးဆန်းသော ကျောက်တုံးကြီးအား သွားရောက် လေ့လာ ကြည့်ရှုသူ များလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ လူအများ စိတ်ဝင်စားနေသည့်
ကျောက်တုံးကြီးမှာ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ကျောက်တုံးကြီးကဲ့သို့ပင် အလားသဏ္ဌာန် တူညီသော ကျောက်တုံးစွန်း တစ်ခုတွင် တည်ရှိနေပြီး အောက်ခံ ကျောက်တုံး အစွန်း၌ ဟန်ချက်ညီစွာ တည်ရှိနေပြီး
တွန်းကြည့်က လှုပ်၏။ အောက်ခံ ကျောက်မျက်နှာပြင်နှင့် အပေါ် ကျောက်တုံး ထိစပ် မျက်နှာပြင်အောက်မှ ဝါးခြမ်းပြားနှင့် ထိုးကြည့်လျှင် လွတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်း ကျောက်တုံးကြီး တည်ရှိရာ
နေရာမှာ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့
အရှေ့ဘက် ပေါင်းလောင်းမြစ်အား ကျော်လွန်ပြီး တောင်ပေါ် ကျေးလက်တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရာ ကူးတို့ဆိပ် ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဘက်စွန်း ရွှေပြည်သာယာ
ကျေးရွာ အရှေ့တောင်ဘက် ကျောက်အိုင် တောင်ကြောပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ပျဉ်းမနားမြို့မှ သွားလျှင် ၁၂ မိုင် ၁၃ မိုင်ခန့် ဝေးကြောင်း သိရသည်။ ကျောက်တုံးကြီး တည်ရှိမှန်း သိရှိဖော်ထုတ်သူမှာ
ပျဉ်းမနားမြို့၊ ကန်ဦးကျွန်းတော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးမာနိတ ဖြစ်ပြီး ဆရာတော်အား ၎င်းအရပ်၌ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား အဆင်းသဏ္ဌာန်တူ ကျောက်တုံးကြီးရှိကြောင်း အိပ်မက်အရ
ဆရာတော် ဦးမာနိတနှင့် ပျဉ်းမနားမြို့မှ ဓာတ်ပုံဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေး လုပ်ငန်း လုပ်သူ ဦးချစ်ကို၊ အဖော်နှစ်ဦး ပေါင်း လေးဦးတို့သည် အိပ်မက်ပါအတိုင်း ၎င်းအရပ်သို့ သွားရောက်၍ ဒေသခံတစ်ဦး
ဖြစ်သည့် ကိုဟန်ငြိမ်းဦး ဆိုသူအား ဤတောင်ကြောပေါ်တွင် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား အလားသဏ္ဌာန်တူ ကျောက်တုံးကြီးများ တွေ့မိသလား မေးမြန်းရာမှ ဤတောင်ကြောတွင် အမှန်တကယ် ရှိကြောင်း
ပြောသဖြင့် ကိုဟန်ငြိမ်းဦး လမ်းပြရှာဖွေရာမှ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဆရာတော် ဦးမာနိတက မိန့်ကြားသည်။
“ဒီကျောက်တုံးကြီးက ဟိုကတည်းက ရှိနေခဲ့တာ။ ကျွန်တော်တို့ တောင်ကြောပေါ် ဒီကျောက်တုံးကြီးအောက် လိုဏ်ဂူထဲမှာ မီးသွေးဖုတ်စဉ်က ဒီကျောက်တုံးကြီးက တင်ရုံ တင်နေတာ။
ငလျင်တွေဘာတွေလှုပ်ရင် ကျောက်တုံးကို ပြုတ်ကျရင် အခက်တွေ့မယ်ဆိုပြီး ကုတ်နဲ့ လူငါးဦးခန့် ကုတ်နဲ့ ကော်ချခဲ့ဖူးတယ်။ လှုပ်သာလှုပ်တယ် ပြုတ်ကျမသွားဘူး” ဟု ဦးသိန်းလွင် (တပ်မတော်အငြိမ်းစား) ယခု ရွှေပြည်သာယာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆရာတော် ဖြစ်နေသည့် ဦးသုမနက ပြောပြသည်။ ကျောက်တုံးကြီး၏ အရွယ်အစားမှာ လုံးပတ် ၃၈ ပေ ၁၀ လက်မ၊ အလျား ၁၈ ပေ၊ အနံ ၁၁ ပေ လေးလက်မ၊ အမြင့် ၁၀ ပေ လေးလက်မ ရှိပြီး အောက်ခံ ကျောက်ပြားနှင့် ကျောက်တုံး ထိစပ် ဧရိယာ အလျား သုံးပေ ၉ လက်မ၊ အနံ နှစ်ပေ နှစ်လက်မ ရှိကြောင်း၊ ကျောက်တုံးကြီး ကျောက်စွန်းထွက် ဧရိယာမှာ ၆၆ ပေ ရှိကြောင်း သိရသည်။ “ဒီတောင်ကြောကိုတော့ ကျောက်အိုင်တောင်ကြောဟု ခေါ်တယ်။ ဘာလို့ ကျောက်အိုင်တောင်ကြောလို့ ခေါ်လဲဆိုရင် ဒီတောင်ကြောပေါ်မှာ အခု ကျောက်တုံးကြီးနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျောက်အိုင်ကြီး ရှိပြီး ဒီကျောက်အိုင်ရဲ့ ရေအနက်ကတော့ လူကြီး လက်ခုပ်တစ်ဖောင် နက်တယ်။ အကျယ်ကတော့ ၁၅ ပေ ပတ်လည်ခန့် ရှိမယ်။ ကျောက်အိုင်ရဲ့ အနီးဝန်းကျင်မှာတော့ နတ်ရေတွင်း တစ်ခု ရှိတယ်။ အနက် တစ်ပေခွဲလောက် ရှိတယ်” ဟု ၎င်း ဒေသခံ ကိုဟန်ငြိမ်းဦးက ပြောသည်။ ယခုအခါ ၎င်း ကျောက်တုံး အထက်၌ စေတီတစ်ဆူ တည်ရန်အတွက် သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရန် ဂေါပက အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း ကျောက်တုံးကြီးအား လာရောက် လေ့လာသူများ မကြာခဏ ရောက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by Xai Yak at 08:59 No comments:
ကို လွမ်းနေတာ နှင်း
ကို အရောက်ပြန်မယ် နှင်း
အလှတွေ နဲ့ လာချုပ်ကုန်လဲ
ကို ချစ်နေတာက နှင်း
ကိုတကယ်ချစ်မှာ က နှင်းပဲ
နှင်းဆိုတာ ကို့အတွက်တော့ထာဝရပါ ။ ။
Posted by Xai Yak at 13:10 No comments: